ထိုင်းနိုင်ငံရှိကရင်၊ချင်၊ကချင်၊သျှမ်း၊ဗမာ၊မွန်စသောမြန်မာပြည်သားမျာအားလုံးအတွက်အထူးသတိပေးချက်နှင့် လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ထိုင်းနိုင်ငံရှိကရင်၊ချင်၊ကချင်၊သျှမ်း၊ဗမာ၊မွန်စသောမြန်မာပြည်သားမျာအားလုံးအတွက်အထူးသတိပေးချက်နှင့် လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေ	March 10, 2010
လာမည့် မာတ်ခ်ျလ ၁၂ ရက်နေ.မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်ကိုထောက်ခံသည့်အနီရောင်ရှပ်အဖွဲ.သည် ထိုင်းအစိုး ရကိုဖြုတ်ချဖို. တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လူထုဆန္ဒပြပွဲဆင်နွှဲရန်ရှိသည်၊အနီရောင်ရှပ်အဖွဲ.သည် လူထုအင်းအားတစ်သန်းစုဆောင်ရန်ကြိုးစားနေပြီး အများစုက နယ်အရပ်ရပ်ကလာသည့်ဆင်းရဲ သားများပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုလည်းစုဆောင်ရန်ရှိသည်ဟု အစိုးရသတင်းဌာနကယုံကြည်နေသှ်၊အနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီအုပ်စုသည် ရသည့်နည်းဖြင့် အစိုးရကိုဖြုတ်ချနိုင်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံတိုက်ပွဲဝင်မည် ဟုဆုံးဖြတ်သည်၊ဒါကြောင့်၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုဦးတည်သည့်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ရပ်သို.ကူးပြောင်းသွားရန် ရာခိုင်နှုန်းများနေသည်၊အနီရောင်အုပ်စုသည် ဘန်ကောက်မြို.ကြီးအပြင်၊ ၁၊နခွန်သဝမ်း၊၂၊နခွန်ရာခ်ျစီမာ၊၃၊အယုဒ္ဓယာ၊၄၊နခွန်ပထုမ်၊၅၊စမုတ်ပရကန် ခရိုင်တို.မှာလည်း လူစုလူဝေဖြင့်ဆန္ဒပြကြမည်လို.စီစဉ်ထားပါသည်၊
ထိုင်းအစိုးရ၏လုံခြုံရေးဥပဒေကို နွန်ဘူရီးခရိုင်များအားလုံးနှင့်ကျန်ရှိသည့် ၂၁ ခရိုင်The internal security law will cover all areas of Bangkok, all districts of Nonthaburi and 21 other districts in Ayutthaya, Chachoengsao, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon from tomorrow until March 23 ဖြစ်သော ချခင်စော၊နခွန်ပထုမ်၊ပထုမ်ဌာနီ၊စမုတ်ပရကန်၊စမုတ်စခွန်၊တို.မှာမနက်ဖန်ကစ၍တင်းကြပ်ထားမည်ဖြစ်သည်၊
ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်လှုပ်ရှားမှုတွေကို နှိမ်နှင်း၊တားဆီး၊ဖျက်ဆီးခြင်း၊လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်စီမံကိန်းများရေဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အစိုး၇ရုံများ၊အရာရှိများကိုညွန်ကြားသွားရန်၊သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများမှာလုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားပြီးအဝင်အထွက်ပိတ်ပင်ခွင့်၊လက်နက်သယ်ဆောင်ခွင့်တားမြစ်ခြင်း၊ပို.ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်တင်းကြပ်ထားခြင်း၊ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်မည့်အရိပ်လက္ခဏာရှိသည့်နိုင်ငံတော်အရာရှိများကိုထုတ်ပယ်ခွင့်ရှိခြင်းတို.ဖြစ်သည်၊
ရှပ်အဝါအုပ်စုလို.ခေါ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက်လူထုမဟာမိတ်အဖွဲ.သည် တပ်ဆင်ကိုထောက်ခံသည့်ဆန္ဒပြပွဲကိုတန်ပြန်မည်မ ဟုတ်ဘူး၊သို.သော်၊သူတို.အဖွဲဝင်များကသတိဖြင့်စောင့်ကြည့်နေပြီးခေါင်းဆောင်များ၏အမိန်.ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်လို.မနေ.ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါသည်၊
၁၊ လူစုလူဝေနေရာတွေမှာမြန်မာပြည်သားများအနေနဲ.ဝေဝေရှောင်ကြပါ၊၂၊ပတ်စပို.ကိုင်ဆောင်သူများအနေနဲ.လည်းခရီးသွားလာမှုကိုအထူးသတိပြုပါ၊ဥပဒေအကြောင်ပြချက်ဖြင့်ငွေညှစ်ခံရနိုင်သည်၃၊ကြွက်ကြွက်အိတ်တို.၊လက်ကိုင်ဖုန်း၊ရေဒီအိုစက်၊နာကြပ်ကက်ဆက်၊လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ပစ္စည်းအလကာဝေငှမှုများတို. ကိုလုံးဝလက်မခံ၊မကောက်ကြပါရန်၊အထူးသဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါ ကန်.သတ်တားမြစ်ထားတဲ့ခရိုင်များမှာသတိပြုပါ၊၄၊ငွေပေးပြီးလာရောက်စည်းရုံးခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကြည်ပါ၊ဖျားယောင်ဆောင်သင့်ရင်ဖျားယောင်ဆောင်ပါ၊မသွားကြနဲ.၊၅၊ညအချိန်သွားလာမှုကိုရှောင်ပါ၊၆၊ရဲအတုများအထူးသတိပြုပါ၊၇၊အုပ်စုအလိုက်အလုပ်သွားကြပါ၊အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကြပါ၊စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြပါ၊၈၊အစားအသောက်များလုံလုံလောက်လောက်ဝယ်ထားပြီးတစ်လစားသိုလှောင်ထားပါ၊၉၊ခရီးသည်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အလုပ်လုပ်သူများအတွက် လာရောက်သုံးဆောင်သူဖောက်သည်လျော့ကျနိုင်ပြီးသူဌေးစိ တ်ညှစ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ.နိုင်သည်၊သည်းခံပြီးနေကြပါ၊